Guuleed: Galmudug waxay qarka u saaran tahay inay gasho gacata Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Guuleed: Galmudug waxay qarka u saaran tahay inay gasho gacata Al-Shabaab
Qorsho xumada amni ee Qoor-Qoor ayaa sabab u noqday inay Al-Shabaab ku xoogeysato degaanada maamulkan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliye ku-xigeenkii hore ee NISA Cabdisalan Guuleed ayaa sheegay in Galmudug ay khatar ugu jirto in Kooxda Al-Shabaab ay wareegto, kadib markii uu Qoor-Qoor ku fashilmay amniga.
"Dayacaadda amniga ee Maamulka Qoor-Qoor ayaa u sahlaya Al-Shabaab inay dhul badan la wareegto, oo meel 10-KM u jirta Dhuusamareeb ay dhigato Jid-gooyo ama Isbaaro," ayuu yiri C/salaan Guuleed.
Dad badan ayaa su'aallo ka keenay Istaraatiijiyadda amni ee Qoor-Qoor iyo qorshahiisa la dagaalanka Al-Shabaab oo aan mas'uuliyad la iska saarin labadii sano ee ugu dambeeyay, iyadoo qaladkii ugu waynaa uu Farmaajo sameeyay ahaa in Ahlu Sunna burburiyo.
Ahlu Sunna ayaa Al-Shabaab ka saartay Dhuusamareeb, Guriceel iyo inta u dhaxaysa 13 sano kahor, iyadoo intii ay maamulayeen magaalooyinkan aysan marna Al-Shabaab soo haweysan inay duulaan soo qaado.
Qoor-Qoor ayaa ku mashquulay ka shaqeynta danaha Farmaajo, wuxuuna waqtigiisa ugu badan ku bixiyay Muqdisho oo xafiiskiisa shaqada ka dhigtay, isagoo dayacay mas'uuliyaddii uu u dhaartay ee Galmudug.
Al-Shabaab ayaa shalay la wareegtay Bacaad-weyne oo maalin kahor Ciidamada qabsadeen kadibna ay soo faarujiyeen, sidoo kale waxay Kooxda gacanta ku dhigtay degaanno dhowr ah oo ku dhaw magaaladda Hobyo, ee gobolka Mudug.
Waxay Al-Shabaab weeraro joogto ah ku haysaa Dhuusamareeb, oo hadda banaanka looga bixi karin, cabsi amni, waxayna xaaladda u muuqataa inay magaaladda kasii go'doomayso qeybaha kale ee Galgaduud.